Rallye Dakar 2019 Lucas Barron “Trisomie” voalohany mandray anjara
Hanamarika ny tantaran’ny Rallye Dakar hatramin’izay namoronan’i Thierry Sabine azy tamin'ny taona 1978 ny handraisan’ilay teratany Péruviana, Lucas Barron 25 taona izay tratran’ny aretina Syndrome de Down “Trisomie”,
amin’ity andiany faha-41 tontosaina manontolo any Péru nanomoboka ny 6 janoary. Ho mpanamory mpanampy ny rainy, Jacques Barron, i Lucas mandritra an’ity Rallye ity. Efa nandalo fizahana ara-pahasalamana takiana amin’ny fisoratana anarana amin’ny fandraisana anjara amin’ny rallye Dakar izy ary efa manana ny “licence de la fédération international de l’automobile” ihany koa. Efa am-bolana maro no nanomanan’ny ekipazy Jacques sy Lucas Barron an’ity fifaninanana ity ka efa nandray anjara tamin’ny fifaninana Dakar Series fanomanana ny Dakar teny izy ireo tamin’ny septambra 2018. Ny tanjonay, hoy i Jacques Barron, dia ny hanezaka hatramin’ny farany ka ho tody hanitsaka ny tsipika fahatongavana amin’ity rallye ity. Anio alarobia 9 janoary dia ny dingana faha-3 hampitohy an’i San Juan de Marcona amin’i Arequipa mirefy 467 km no hatrehan’ireo mpifaninana.